लोकतन्त्रकै लागि खतरा बन्न सक्छ ‘आईटी आर्मी’ र ‘साइबर सेना’ - Naya Aawaj
११ साउन । नेकपा विभाजनपछि माओवादी छाडेर एमालेमै बसेका पूर्वमन्त्री प्रभु साहको अगुवाइमा ‘आईटी आर्मी’ गठन भएको छ। यसअघि एमालेकै महेश बस्नेतले ‘साइबर सेना’ बनाउने घोषणा गरेका थिए।
तर, राजनीतिक दलहरुले गठन गर्ने यस्ता समूहहरु लोकतान्त्रिक प्रणालीकै लागि खतरा बन्ने विज्ञहरुले बताएका छन्। यस्ता समूहहरुले ‘फेक न्युज’ उत्पादन, झुठो आरोप लगाएर विरोधीमाथि आक्रमण जस्ता अस्वस्थ अभ्यासमार्फत जनमत प्रभावित पार्ने र फरक विचारलाई निषेध गर्ने उनीहरुको भनाइ छ।
केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनले सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचनाको प्रतिकार गर्न कार्यकर्तालाई ‘अरिंगाल’ बन्न सुझाव दिएका थिए। तत्कालीन नेकपाभित्रको विवाद उग्र बनेको बेला ओलीनिकट नेता महेश बस्नेतले म्याग्दीमा आयोजित युवा संघ नेपालको कार्यक्रममा साइबर सेना बनाउने घोषणा गरेका थिए।
साहले मंगलबार भक्तपुरको एक पार्टी प्यालेसमा ‘आईटी आर्मी’को तीन तहको संरचना नै घोषणा गरे। सो समूहको केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा संरचना रहने बताइएको छ। नेपालमा कुनै राजनीतिक दलले औपचारिक रुपमा सूचना प्रविधि इकाइ गठन गर्न लागेको यो पहिलो पटक हो। नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले आईटी आर्मी सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आलोचनामा सक्रिय हुनुपर्ने बताए। ‘अहिले बन्दुक चलाएर हुँदैन, आईटी आर्मीले आवाज उठाउनु पर्छ,’ घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै रायमाझीले भने।
नेपालका लागि यस्तो अभ्यास नयाँ भए पनि विश्वका विभिन्न मुलुकका तानाशाह बन्न चाहने नेता र तिनको पार्टीले भने यस्तो अभ्यास गर्दै आएका हुन्। एमालेले गर्न खोजेको अभ्यास अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प, ब्राजिलमा जायर बोल्सोनारो र भारतमा नरेन्द्र मोदीले गरेको अभ्यासकै नक्कल भएको नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआइजी तथा सूचना–प्रविधि विज्ञ डा. राजीब सुब्बाले बताए।
‘भारतमा भाजपाले मोदीलाई जिताउन प्रचुर मात्रामा यही अभ्यास गरेको हो। यहाँ अब चुनाव आउन्जेलसम्म केही गरेर देखाउने समय छैन। अबको सहारा भनेको सूचनालाई कसरी आफूअनुकूल प्रसार गर्ने भन्ने नै हो। त्यही भएर यस्ता समूह बनाइएको हो,’ सुब्बाले भने, ‘सामान्य रुपमा भन्दा उनीहरुको लक्ष्य सोसल इन्जिनियरिङको प्रक्रियाबाट विपक्षीको मानसम्मानमा क्षति पुर्याउने नै हो।’
‘भारतमा मोदीले आईटी सेल बनाएर त्यसलाई व्यापक रुपमा परिचालन गरेर चुनावमा राम्रो परिणाम ल्याएको देखिएको छ,’ नेपाल फ्याक्ट चेकका सम्पादक उमेश श्रेष्ठले भने ‘आईटी सेल नभए मोदीले चुनाव हार्थे भन्ने त होइन, तर त्यो परिमाणमा मत पाउँदैनथे।’
सन् २०१४ मा भारतमा भएको आम निर्वाचनमा तीन दशकपछि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले पूर्ण बहुमत प्राप्त गरेको थियो। सन् २०१९ मा आइपुग्दा भाजपाले सिट संख्या झनै बढायो। व्यापार छाडेर राजनीतिमा आएका डोनाल्ड ट्रम्पले विभाजनकारी भाषणको माध्यमबाट सन् २०१६ मा भएका राष्ट्रपति निर्वाचन जितेका थिए। उग्र दक्षिणपन्थी विचार राख्ने बोल्सोनारोले उत्तेजक भाषणमार्फत बहुसंख्यक जनमतलाई प्रभावित तुल्याएका थिए।
एमालेको आईटी आर्मीको केन्द्रीय समितिमा १५१ सदस्य छन्। प्रदेश कमिटीहरू १०१ सदस्यीय, जिल्ला कमिटी ५१ सदस्यीय र पालिका कमिटी ३३ सदस्यीय बनाइएको छ। आईटी आर्मीको संरचनामा सङ्गठन, प्रशिक्षण, उत्पादन, प्रचार र इन्टेलिजेन्स विभाग समेत छ।
अमेरिकामा भने विपक्षी दलको मानमर्दन लगायतका विषयमा कानुन आकर्षित भएपछि यस्तो गतिविधि कम भएको तर भारतमा ज्यादा दुरुपयोग भएको श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘भारतमा आइपुग्दा मोदीले आईटी सेललाई गलत रुपमा प्रयोग गरे। आलोचकहरूको आवाज बन्द गर्न यसलाई प्रयोग गरियो,’ श्रेष्ठले भने।
भाजपाको आईटी सेलको मुख्य तारो विपक्षी दलका नेता सोनिया गान्धी, राहुल गान्धी र उनीहरुको परिवारलाई बनाउने गरेको छ। अमेरिकामा ट्रम्प पक्षले क्याम्ब्रिज एनालाइटिकाको माध्यमबाट प्राप्त सूचनाको आधारमा डेमोक्य्राटहरुको मनस्थिति परिवर्तन गराउन फेसबुकमा हिलारी क्लिन्टन विरोधी गलत समाचारहरुको फिडको ओइरो लगाइएको थियो। अर्कोतर्फ, ट्रम्पले ट्विटरमा चर्का कुरा गर्दै श्वेत सर्वोच्चतालाई बढावा दिए, जसका कारण रुढीवादी समूहलाई आफ्नो मुख्य आधार बनाए। त्यसैको मद्दतमा उनी २०१६ मा हिलारी क्लिन्टनलाई हराउँदै राष्ट्रपति बनेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेपछि सत्ताबाट बाहिरिएका ओलीले आक्रामक प्रतिपक्षी बन्ने संकेत गरेका छन्। सडक तताउन उनले युथ फोर्सलाई ब्यूँताएका छन्। त्यसलाई सिको गर्दै माधव कुमार नेपाल पक्षले अखिल फोर्स स्थापना गरेको छ। आईटी आर्मीको पनि देखासिकीको सम्भावना बढेको छ।
ग्लोबल इन्स्टिच्युट फर इन्टरडिप्लिनसरी स्टडिजकी रिसर्च फेलो दोभान राई पछिल्लो समय प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढेको बताउँछिन्।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश सरकारले फिर्ता लिने
टिचिङ अस्पतालले मुसा, उडुस, उपियाँ र साङ्ला मार्न आह्वान गर्‍यो बोलपत्र!
विज्ञको अनुसार उपत्यकामा राति ८ बजेपछि सवारी चलाउन नपाइने सरकारको निर्णय अव्यवहारिक
बिचौलियालाई दुई लाख बुझाएर तालिम केन्द्रमा चार नक्कली विद्यार्थी छिरे, छ जना पक्राउ